သငျသညျငါတို့ကဲ့သို့ဆိုက်ကိုရှာဖွေတဲ့အခါ,သင်ချွတ်လူရှုပ်ပြုသောအမှုဖွင့်ပြီးနောက်သင်ပြုပါပထမဦးဆုံးအရာကပါရှိပါသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်. သင်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ဆက်မှုစာတစ်စောင်ကိုဖတ်ပြီးနောက်သင်တို့မူကား,ငါတို့ယခုအချိန်တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းအဘယ်ကြောင့်သင်ပြောပြကြောင်းမသာ,သင်မူကားလည်းစနစ်တကျဒီစာကြည့်တိုက်ကိုအသုံးပြုပုံနှင့်ပလက်ဖောင်းကိုယ်တိုင်ကသင်မျက်နှာပြင်ပင်မတည်ရှိပါဘူးတူသောခံစားရပါစေလိမ့်မည်ဟုမျက်နှာပြင်၏ရှေ့မှောက်၌. လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာငါတို့ရှိသမျှသည်အသစ်အမာခံလိင်ဂိမ်းရှိသည်။ သငျသညျတတ်နိုင်သမျှအများဆုံးစွဲငြိဖွယ်ရာများနှင့်အပြန်အလှန်လမ်းအတွက်သူတို့ကိုပျော်မွေ့ရလိမ့်မယ်။, အကြှနျုပျတို့သညျသူတို့အပျေါမှာသင့်ရဲ့မုန်းတီးမှုတိုက်ဖျက်မည်ရှိရာဇာတ်ကောင်များနှင့်အခြားဂိမ်းနှင့်အတူမေတ္တာ၌လဲကျစေမည်ဟုလိင်ဂိမ်းရှိသည်။ အသည်းအသန်ကနေညစ်ပတ်နှင့်အရှက်မှ,အရာအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ သင်ပင်ဒီနေရာမှာအမျိုးသမီးတစ်ဦး၏မည်သည့်အမျိုးအစားကိုတွေ့လိမ့်မည်,ပိန်ကပ်ကနေဘတ်စ်ကားနှင့်ဘီဘာနှင့်ငါတို့သည်ပင်သင်ချစ်ကာတွန်းနှင့်ဘီဘာစီးရီးကနေကလေးနှင့်အတူရုပ်ပြောင်ဂိမ်းများ,ဒါမှမဟုတ်ရုပ်ရှင်များနှင့်ပင်နာမည်ကြီးတွေအဆိုတော်တွေသို့မဟုတ်သတင်းကျောက်ချရပ်နားများကဲ့သို့ပင်နာမည်ကြီးတွေ. သင့်အတွက်ပြီးပြည့်စုံတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကိုမရှာနိုင်ဘူးဆိုရင်သူ့ကိုပဲတည်ဆောက်လိုက်ပါ။, ဂိမ်းအချို့ကိုသင်ခြစ်ရာကနေဇာတ်ကောင်ဖန်တီးနိုင်ပါလိမ့်မည်ထိုကဲ့သို့သောရှုပ်ထွေးစိတ်ကြိုက်မီနူးနှင့်အတူလာ။
ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုကြီးမြတ်ဂရပ်ဖစ်နှင့်အံ့သြဖွယ်လှုပ်ရှားမှုအင်ဂျင်နှင့်အတူတင်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပင်အသံသည်ဤဂိမ်းအသစ်အတွက်တိုးတက်နေသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ရုံကာမဂုဏ်ကိုချီးချင်မည်မဟုတ်ဒါကြောင့်အစစ်အမှန်ခံစားရလိမ့်မည်ဟုဆိုက်ပေါ်တွင်လိင်ဂိမ်းရှိသည်။ ထိုအသင်ချုပ်တည်းပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပူဖြစ်ကြောင်းဂိမ်းရှိပါတယ်။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုညစ်ညမ်းကဒီမှာဖြစ်ပါသည်,ယခုရုံသင့်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလိုအပ်ပါတယ်။
သင်ကြိုက်နှစ်သက်အံ့သောငှါကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးမျိုး၏အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ပေမယ့်,ငါတို့ကဲ့သို့ဝေးသင်ခေါင်းစဉ်မဆိုကောက်နိုင်ဟုပြောနေသကဲ့သို့ဝေးသွားနိုင်ပါတယ်လိင်ဂိမ်း၏ဤစုဆောင်းမှုအတွက်ဒါသေချာပါသည်နေဆဲသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာကိုအဘယ်သူမျှမကိစ္စ။ လိင်ဆက်ဆံရာမှာထိန်းချုပ်မှုရှိတာကြောင့်ပါ။ သင်ပိုမိုအသည်းအသန်ဘက်၌ရှိသောဂိမ်းများတွင်အမာခံသွားနိုင်ပြီးသင်၏ကျွန်များကိုခမာနီများတွင်အသည်းအသန်သွားနိုင်သည်။
ဒါေပမယ့္သင့္ရဲ႕၀က္ဘ္ဆိုက္ကိုရွာေဖြဖို႔ လိုအပ္ေနေသးတယ္ဆိုရင္ေတာ့သင့္ရဲ႕၀က္ဘ္ဆိုက္ကိုေလ့လာဖို႔ အသင့္ေတာ္ဆံုးနည္းလမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းတွင်အဆင့်မြင့်ရှာဖွေရေးအင်္ဂါရပ်တစ်ခုရှိပြီးသင်၏ကြိုက်နှစ်သက်မှုအပေါ်အခြေခံ၍စစ်ထုတ်စက်များကိုသတ်မှတ်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကျနော်တို့ကဒီမှာသင်လိုအပ်သမျှရှိသည်။ သင်သွားဖုံးဤမျှလောက်များစွာသောအကြောင်းပြချက်များပေးမည်ရိုင်းညစ်ပတ်ညစ်ညမ်း၏တစ်ဦးကပြီးပြည့်စုံစုဆောင်းခြင်း။ သင်သည်အကောင်းဆုံးစတူးဘ ၀ ကိုနေထိုင်ခြင်းနှင့်ဟေးဒီးစ်တည်ဆောက်ခြင်းကိုပျော်မွေ့စေလိမ့်မည်ဟုအချို့သောချိန်းတွေ့ခြင်းဂိမ်းများ၊ရုပ်ပြောင်ဂိမ်းများ၊ပင်အချို့ချိန်းတွေ့ခြင်းများကိုသင်ရရှိလိမ့်မည်။
ငါတို့သည်လည်းစစ်မှန်သောဂိမ်းကစားဘို့စစ်မှန်သောဂိမ်းအတွေ့အကြုံများကိုပူဇော်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်တချို့ကကျောဇောဖြစ်ကြပြီးကျွန်တော်ပင်ဂျပန်ကနေအပေါငျးတို့သလမ်းကျောဇောရှိသည်။ ဤဂိမ်းတွင်ကြံစည်မှုလိုင်းများ၊ဇာတ်ကောင်အမျိုးမျိုး၊သင်ဖြေရှင်းရန်နှင့်တည်ဆောက်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ပြီးတော့မှတ်ပုံတင်မရှိတဲ့ဆိုက်မှာအခမဲ့ကစားနိုင်တဲ့ဝိုင်ဘီအက်စ်ရဲ့နာမည်ကြီးဂိမ်းလောကကိုအမြဲလိုလိုဝင်ရောက်ကစားချင်နေတဲ့အလိုတူအလိုပါပရိသတ်တွေအားလုံးကလည်းစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။
၂၀၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေတုန်းကဆိုရင်အခမဲ့လိင်ဂိမ်းကစားခြင်းဆိုဒ်တွေကနေမက်ဆင်ဂျာတွေရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြရပါတယ်။ သို့သော်အခြားဆိုဒ်များသည်ဟက်ကာများအားနည်းချက်ရှိသည်၊သင်၏အချက်အလက်များကိုခိုးယူနိုင်ပြီးသင်၏ကီမိုအလေ့အထများကိုသိနိုင်သည်။ ကောင်းပြီ,ငါတို့သည်သင်တို့န့်အသတ်လိင်ရှာဖွေရေးဘို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးပြည့်စုံသောအမည်မသိညစ်ညမ်းအတွေ့အကြုံကိုပူဇော်ကြောင့်ဤနေရာတွင်ဖြစ်ပျက်ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ မှတ်ပုံတင်မရှိ၊ဒေါင်းလုပ်မရှိ၊သဲလွန်စမရှိ။ ကျနော်တို့တောင်မှသင့်ရဲ့အိုင်ပီလိပ်စာမှတ်ပုံတင်ရန်ကြဘူးနှင့်သင်ပင်လုံးဝအမည်ဝှက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်အသိုင်းအဝိုင်းအင်္ဂါရပ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်သင့်အပိုင်းကိုလည်းလုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။, ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားမည်သည့်အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမျှဝေခြင်းဘယ်တော့မှမအကြံပြုပါ၊ထို့အပြင်မည်သူမျှသင်၏ရှာဖွေမှုသမိုင်းမှတဆင့်ကြက်ညှာလိမ့်မည်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းကစားခြင်းကိုပြန်လည်ဖမ်းယူမည်ကိုသေချာအောင်ပြုလုပ်ပါ။